फेसबुकमा छविप्रति रेखाको रिस – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
फेसबुकमा छविप्रति रेखाको रिस
काठमाडौं, वैशाख १९ । नेपाली फिल्मका सफल निर्माता छविराज ओझा र सफल नायिका रेखा थापाको जोडी सँगै रहँदा जति कम चर्चामा आउँथे, दाम्पत्य जीवनमा पूर्णविराम लागेपछि यो जोडीको चर्चा ह्वात्तै चुलिएको छ । खासगरी समय–समयमा ओझा र थापाले एकापसमा आरोपप्रत्यारोपका शब्द खर्चन थालेपछि सबैको ध्यान यिनीहरु तिर तानिन थालेको छ ।
केही समय अघि छविले रेखाका बारेमा एक पत्रिकामा बोलेपछि रेखाले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो कडा प्रतिक्रिया जनाएकी छन् । आफ्नो व्यानर रेखा फिल्मस्बाट निर्मित फिल्म ‘हिम्मतवाली’को पोष्टप्रोडक्सनमा व्यस्त रेखाले शुक्रबार फेसबुकमा छविलाई ‘मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको’ मानिसको संज्ञा दिँदै स्ट्याटस लेखेकी छन् ।
नायिका थापाको स्ट्याटस::
‘हाहाहाहा। हासन पनि कति हास्नु हो !!! यो छबि भन्ने मान्छेको मानशिक सन्तुलन अब चाहि गुमेकै रहेछ भन्ने मैले बुझे आज । मलाई त , घाँस काट्दै गरेकी एक यूवतीलाई आफूले हिरोइन बनाएर स्टारको बाटोमा लगिदिएको छविको वुझाई छ रे । म मिस नेपालमा भाग लिदै गर्दा त्यो मानशिक सन्तुलन ठीक नभएको र उमेरले डाँढा काटेको मान्छेसँग भेट भएको दुनियालाई थाहा छ । र घास काट्ने मान्छे म त्यो बेला रहेछु भने पनि, आज मेरो मेहनेत र कर्मले यो सफलता पाउनुमा गर्व गर्छु र तँ जस्तो मान्छेसँग कसरी १० वर्ष बिताए भनेर दुख लाग्छ । तिनै दिउस भरि घास काटेर पैसा कमाएर हाम्रो सिनेमा हेर्न आउने दर्शकहरुको मन घासी भनेर नदुखा, पाप लाग्ला । हुन त तेरो पाप दिन प्रतिदिन तेरो सामु आउदै छ, अझै कति देख्नु पर्ने हो यो आँखाले । झुन्डेर मरेको वा मारेको प्रेत आत्माको पनि सराप लाग्छ नै तँलाई । छवि, तलाई मेरो नाम नलिए खाएको नि पच्दैन कि के हो ? तँसँग छुटिए पछि म त तेरो नाम कतै लिन्न त ? के चाहन्छस मसँग अझै । तेरो सम्पति त सबै फिर्ता नै गरिदेको हो अब के बाँकी छ । मेरो प्रगति र तेरो दुर्गतिमा तेरो आफ्नो मानशिक सन्तुलन नबिगार !! बरु कसरि मेरो तुलनामा आउन सक्छस, त्यो उपाय सोच्नु तेरो लागि राम्रो होला । अब बिहेको कुरा, तँसँग मेरो कानुनी रुपमा कहिले बिहे भएको थियो र आज ३ वर्ष पछि आएर डिभोर्सको कुरा गर्नुपर्यो । अझै तलाई म पाउछु भन्ने सोच छ भने, सुन !! यो जिबन बरु एक्लै बिताउन सक्छु त जस्तो लाछी र विवेकहिन मनुष्येको रुप धारण गरेको पशुसँग सक्दिन । अन्तमा, तँ सक्छस भने मसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गरेर देखा, होइन भने अबदेखि मेरो नाम लिएर व्यापार नगर, तलाई त्यो अधिकार छैन । सुतिरहेको कोब्रा साँपलाई घरि घरि जिस्काई नराख, डस्ला कुनै दिन । र सहर को भट्टीभट्टीमा बसेर लोकल रक्सी खादै मेरो नाम नलिनु यो तँलाई मेरो खुल्ला सुझाव हो । तँलाई भगवानले थोरै बुद्धि र विवेक प्रदान गरुन यो मेरो कामना ।’
५२ भाग पुग्यो डिट्ठा सा’ब
जरीनलाई फुड पोइजन